mercredi, 25 mai 2022 14:28
Sekoly Miaramilam-Pirenena : Mankalaza ny faha 99 taona niorenany
Mankalaza ny faha 99 taona niorenany ny Sekoly Miaramilam-Pirenena (SEMIPI) aty Fianarantsoa. Raha tsiahivina dia niorina ny taona 1923, nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany ny Sekoly, ary tao Betongolo no nisy azy voalohany. Nisy ny fifindran-toerana maro, ka napetraka taty Fianarantsoa ity sekoly ity tamin’ny taona 1964. Manomana ny zatovo lahy Malagasy hiditra eny amin'ny Sekoly ambony fanofanana ho manam-boninahitra no anisan’ny tanjon’ny SEMIPI.
Fisaorana sy fankasitrahana ny Mpiasan'ny Fahasalamana ho setrin'izany no nanombohan-dRamatoa Sekretera Jeneraly, Dr YASMINE Lethicia Lydia ny fandraisam-pitenany nandritra ny fananganan-tsaina androany. Vanim-potoanan'ny ririnina isika izao, mahazo vahana ny fiparitahan'ny aretina maro samihafa, isan'izany ny Covid-19. Tsapa hoy i Dr YASMINE Lethicia Lydia, Sekretera Jeneralin'ny ministeran’ny Fahasalamana, fa toa zary adinodino tato ho ato ny fanajana ireo fepetra sakana sy ny fanaovana arovava orona. Nampatsiahy ny maha-zava-dehibe ny fanaovana vaksiny entina hanamafisana ny fiarovan-tena Ramatoa Sekretera Jeneraly. Ao anatin'izany indrindra dia hatomboka amin'ity herinandro ity ny "campagne 100 jours de vaccination anti-Covid", ary hipàka manerana ny Nosy izany. Manentana ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ny tenany, hanentana ireo mpiara-monina hanao vaksiny miady amin'ny Covid-19 ho an'ny tombontsoa iombonana.
Araka ny fanazavan'ny Talen’ny fitantanam-bola eo anivon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, Rajaonarivelo Brysola, dia efa nisitraka karama volana aprily ireo izay mandray amin'ny alalan'ny "bon de caisse", fa ho an'ireo "virement bancaire" kosa dia misy ny efa ao anaty kaonty (positionné), ny sasany indray mbola miandry izany ho hita ao anaty kaonty, arakaraky ny bankin'ny tsirairay izany. Hivoaka alohan' ny faha 25 ny volana, hoy izy, ny karaman’ny PAT, ho an'ny oniversite rehetra izay nahafeno ny dingana tokony harahina amin'izany. Ho an'ny Oniversiten'Antananarivo manokana dia tsy mbola nandefa ny antonta-taratasy rehetra ilaina amin'izany ka ahiana ny hisian'ny fahataran’ny fandoavana ny karaman’ny mpandraharaha.
jeudi, 19 mai 2022 19:50
Mahajanga : Hanorenana kianja mitafo mahazaka olona 4 000 isa
Nankatoavina sy nomena alalana nandritra ny Filankevitry ny Minisitra natao ny 18 May 2022 ny fanorenana kianja mitafo mahazaka olona 4 000 isa ao Mahajanga. Eo amin'ny ampahan'ny arabe anelanelan'ny toeram-panorenana sy ny lycée Philibert TSIRANANA no hisy izany. Nankatoavina ihany koa ny fanomezana ireo fotodrafitrasa fanorenana ho an'ny fikambanana "Tennis Club de Mahajanga" na TCM. Hiantoka ny fiarovana ny toeram-panorenana, sy ny fanomezana an'ny TCM ireo kianja fanaovana tenisy vaovao sy ny trano vaovao io ny fitondram-panjakana. Ny kianja mitafo ahitana toerana 4 000 isa, eo amin'ilay ampahan-dalana voakasiky ny tetikasa dia mifanaraka amin'ny drafitra nohamarinin'ny mpitantana ny tetikasa sy ny fankatoavana azy vonjimaika.
Fanafainganana ny asa : Nahazo solosaina ireo Fokontany ao amin'ny Boriboritany II Antananarivo Renivohitra
Nanolotra solosaina ho an'ireo Fokontany ao amin'ny Boriboritany Faha II Antananarivo Renivohitra, ary koa fitaovana maro samihafa, toy ny "imprimantes" sy "onduleur" ny solombavambahoaka voafidy tao Antananarivo II, Lanto Rakotomanga. Nambaran’ity farany fa anisany lesoka mampitarazoka ny asa eny anivon'ny Fokontany sy ny sampandraharaha maro isan-karazany ny tsy fisian'ny solosaina. Anisany nisitraka fampitaovana ihany koa ny "Commissariat de police" ary Distrika ao amin’ny Boriboritany Faha II, hanamoràna sy hanafainganana ny asan'izy ireo. “Isika tsy maintsy mifanampy sy mitsinjo hatrany ny Vahoaka”, hoy i Lanto Rakotomanga. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 17 mai 2022 22:22
Ambovombe Androy : Misitraka jiro cobra
Notoloran'ny fitondram-panjakana, amin'ny alalan'ny Ministeran'ny angovo sy akoran'afo jiro Cobra, miisa efapolo ny Faritra Androy. Nandray izany ny alatsinainy 16 mey 2022 ny Goverinoran'ny Faritra, Dr SOJA Lahimaro, notronin'ny Prefen'Ambovombe ary natrehin'ny Ben'ny tanànan'Ambovombe ambonivohitra. Hampiasaina eto an-tampotanana ireo jiro ireo, hanomezana endrika ny tanàna, indrindra fa hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo Fokontany somary mbola ahitana endrika fandrobana sy hala-botry.
Mbola eo ny valanaretina Covid-19, ary Faritra efatra no mbola ahitana tranga, dia Analamanga, Itasy, Amoron’i Mania, DIANA, Atsinanana ary Atsimo Atsinanana, fa Analamanga no betsaka amin’ireo. Tsy nisy kosa ny aina nafoy tamin’iny herinandro farany iny. (Jereo Sary Tohiny)
Nandritra ny diany tany Sahabe, Distrikan’Ambatondrazaka no nanamafisan’ny filoha Andry Rajoelina ny hanamboarana ny "autoroute" voalohany eto Madagasikara, izay hampitohy an'i Toamasina sy Antananarivo, ary mandalo ao Ambatondrazaka. Tsiahivina fa ny 17 martsa 2019 no efa nanambaran’ny filoha Andry Rajoelina tao Toamasina, fa hatomboka afaka iray volana sy tapany ihany koa ny fanamboarana ny "autoroute" miainga ao Toamasina mipaka amin’ny lalampirenena mampitohy an’Antananarivo. Nasiany resaka tao Ambatondrazaka ihany koa ny lalampirenena faha-44 mampitohy an’i Moramanga sy Ambatondrazaka. Mizotra ny asa fanamboarana ary “tsy maintsy ho vitaina hatramin’ny farany io lalana io», hoy izy. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 02 mai 2022 17:24
Toliara : Tonga nitondra ny fanampiana ireo traboina ny Minisitra TINOKA Roberto
Tonga aty Toliara ny Minisitra mpiahy ny Faritanin'i Toliara, TINOKA Roberto, nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina noho ny rivodoza JASMINE tamin’ireo Kaominina manodidina an'i Toliara toa an'i Betsinjaky sy Miary. Niarahan'ny minisitra TINOKA Roberto sy ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna Vaovao sy Toeram-ponenana Gérard Andriamanohisoa tamin’ny ekipan'ny BNGRC. Maro ireo vahoaka tonga nanotrona sy nankasitraka izao fijerena manokana ireo olona sahirana izao. (Jereo Sary Tohiny)
Nanatanteraka fidinana ifotony tany amin’ny toby famokarana herinaratra azo avy amin’ny riandrano tany Andekaleka ny minisitry ny Angovo sy ny akoran’afo, Andry Ramaroson, sy ny Tale jeneraly mpisolo toerana an’ny orinasa Jirama, Rivo Radanielina, ary ny Tale misahana ny herinaratra eo anivon’ny Jirama, Désiré Marcel Randrianarisoa ny faran’ny herinandro lasa teo. Ny fanaraha-maso ny fizotry ny asa taorian’ny fahamaizana niseho tao an-toerana ny 2 janoary 2022, izay nampitsahatra tanteraka ny famatsiana herinaratra tao amin’ity toby ity no anton’izao fidinana ifotony izao. « Nanome antoka ny mpanjifa sy ny vahoaka Malagasy isika fa tsy maintsy tafarina io fahasimbana io… nanome toky isika fa isaky ny 6 herinandro dia tokony mamerina gropy iray, ary averiko ihany fa tsy nisy gropy nandeha na iray aza tamin’izany fotoana izany. Amintsika miteny izao, efa misy gropy iray tafaverina mamatsy herinaratra miainga avy aty Andekaleka », hoy ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny orinasa JIRAMA, Rivo Radanielina.